Isbaheysiga OKA oo beeniyey warar lagu faafiyey baraha bulshada - Iftiin FM
Isbaheysiga OKA oo beeniyey warar lagu faafiyey baraha bulshada
by Iftiin FM Reporter January 15, 2022
Isbaheysiga One Kenya alliance ayaa Waxba kamajiraan ku tilmaaamay Wararka sheegaya in ay Kalonzo Musyoka ay uso Xusheen in uu Tartamayo Kursiga Madaxweynaha dalka iyada oo Musalia Mudavadi amaba Martha Karua Midkood uu uso xulan doono Madaxweyne kuxugeen.
Hoogaamiya Xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka iyo dhigiisa Ford kenya Moses Wetangula oo Saxafada kula hadlay Nakuru ayaa ku baaqay in la joojiyo hadalada brobagaandhada ah isla Markana laga war suugo go’aanka Isbaheysiga.
Hoogaamiyasha ayaa dhanka kale taageerayaashooda uu xaqiijiyay in nidaamka soo xulista cida kursiga madaxweynaha uu tartami doonto uu gabogabo ku dhawyahay.
Hoogaamiyasha ayaa sido kale waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in hoogaamiyaha Xisbiga Amani Musalia Mudavadi uu diiday in uu kulankaasi ka qayb galo iyaga oo sheegay in uu cudur daar soo dhibtay.
Hoogaamiyaha Xisbiga NARCH KENYA Martha Karua iyo afhayenka aqalka barlamaanka Justin Muturi ayaan sido kale ka qayb galin kulankaasi balse soo diray Wakiilo iyaga ka soocday.
OKA alliance denies
Farxad uu soo hoyatay Shacabka Xaafada Mukuru kwa Njenga
Waaxda KRA oo canshuur badan aruurisay
Cudurka Corona oo fara kulul ku haayo Kenya
Iftiin FM Reporter January 18, 2022
Dowladda Kenya oo joojisay duulimaadyada rakaabka ee ka imaanaya Imaaraadka Carabta
Rashiin gar gaar ah oo loo qeybiyey qoysas ku nool Ismaamulka Marsabit
Madaxda Muslimiinta oo taageero uu muujiyeen Raila Odinga
Iftiin FM Reporter January 17, 2022
Mohamed Salah oo ka soo horjeestay dalab ay Liverpool soo hor dhigtay
Iftiin FM Reporter January 16, 2022
Dad lagu eedeeyay cunista iyo ka ganacsiga Hilibka Dadka
Iftiin FM Reporter January 15, 2022
Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadashay taliska booliska Somaliland
Iftiin FM Reporter January 15, 2022 January 15, 2022
Muuse Geelle Yusuf oo ku guuleystay doorashada Guddoomiyaha Guddiga FEIT
Diiwaangelinta codbixiyayaasha oo manta bilaabaneyso
Shiinaha iyo Iran oo ku dhaqaaqeen hirgelinta heshiis iskaashi istiraatiiji ah oo...
Dr. Fred Matiang’i oo ka hadlay Dooroshada guud ee dhaceysa sanadkani
Bruno Fernandes oo iska diiday dalabka Man United
Raila Odinga oo baaq uu diray Dr William Ruto
Iftiin FM Reporter January 16, 2022 January 16, 2022